MAZANO: 35 Nyore Miviri yaunoda muupenyu hwako iye zvino - TELES RELAY
HOME » VIDEOS MAZANO: 35 Nyore Miviri yaunoda muupenyu hwako ikozvino
MAZANO: 35 Nyore Miviri yaunoda muupenyu hwako ikozvino
VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU
Muvhidhiyo ino uchawana kuunganidza kwezvinhu zvakanakisisa zvekugadzira zvinhu nguva dzose! Iwe uchadzidza kuumba zvinhu zvinoshamisa zveimba yako pasina nguva!
Heino sarudzo yemhando dzakanakisisa dzeimba yako:
- Unogona kuita sese yakagadzirwa nesimba inotaridzika chaizvo. Zvishandiso zvaunoda saga yakadzika, dhayi, girasi rinochengetwa uye mukombe unoyamwa. Sungunusa sese uye uwedzere mifananidzo ipi yaunofarira uye inokurudzira. Tora vase uye uise girafu kumucheto pasi. Anofanira kunge akarembera mukati. Dururira saga iri mukati, sunga kapu yekuyamwa sezvaratidzwa muvhidhiyo uye woiririra kuti itonhore pasi. Bvisa girafu
- Iwe unoda magazini yemagazini here? Takagadzirira pfungwa yegadziri yemapuranga magazini rack iyo ichava kuwedzera kukuru kuimba yako yekugara. Iva wakachenjera uye utevera mirayiridzo iyi: uchishandisa mufananidzo wepenzura mukati mebhodi rimwe nerimwe, nzvimbo inofanira kudurwa. Vanofanira kunge vakafanana kune mapurisa maviri. Iwe uchada saga kuti ucheke zvidimbu. Matanda mapepa akaita sepuzzles mu 3D
- Dzorera danda rekugadzira mapuranga mune imwe tsvina yepamusoro. Iwe uchada bhodhi yekucheka, mapenzura, drill. Tora mapencilisi makumi mana uye udzicheke muzvikamu zviviri zvakaenzana. Tora bhodhi yekucheka uye mabhokwe. Chikamu chinofanira kuva pakati pe3 ne 6 cm. Isa mapenzura muchikwere. Isa chifukidzo kumira nemuvara weunosarudza
- Tsvaga mhemberero yemhizha inogona kuitwa nekushandisa tambo. Iwe uchadzidzira kugadzira bhegi rakanaka rine tambo, papepa rembudzi yepachivande uye kunyange chikwama
- Kuita sipo inonakidza uye iwe unogonawo kuita zvipo zvakanaka uye zvinoshanda kune shamwari dzako. Chengetedza zvatinodzidza nyore nyore!
- Chimwe chikamu chekugadzira zvishandiso zvinokonzera matani e-ceramic. Iwe unodzidza kurongedza matairi e-ceramic, kuti ungashandisa sei zvakare kumba
00: 09 Sapu mumufananidzo wechanza
01: 04 Mishonga yakagadzirwa nekucheka mapuranga
12: 41 Mosaic Pfungwa
Nzvimbo yedu yezvemagariro:
Bhalisa kune Craft 5 maminitsi GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Bhalisa ku 5 Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt
Bhalisa kuMabasa kubva ku5 Maminitsi MEN: http://bit.ly/2S69VUG
Kuti uwane mamwe mavhidhiyo uye zvinyorwa, enda:
Ichi chidimbu chakaonekwa pakutanga https://www.youtube.com/watch?v=MrU2_T5kgus
ZVIMWE ZVINOKUDZIDZWA MUNHU MUNYIKA, AUBAMEYANG / SALAH / AGUERO, MESSAGE KUNA MAN! - VIDEO